कसरी घटाउने ? यस्तो छ घटाउने उपाय | Nepal Ghatana
कसरी घटाउने ? यस्तो छ घटाउने उपाय
प्रकाशित : २७ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार १७:३४
पुट्ट पेट निस्किनु धेरैको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यस्तो पेटले शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देखिन्छ । लुगा लगाउँदा पनि पेट लुकाउनै सास्ती हुन्छ ।कोहि जिम धाइरहेका छन्, कोहि दौडिरहेका छन् । यद्यपी खानपान र शारीरिक क्रियाबीच सन्तुलन नमिल्दा पेट बढेको बढ्यै छ ।
जथाभावी खानेकुरा खाने र त्यस अनुरुप शारीरिक क्रिया नगर्दा पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्न पुग्छ । यसले शरीरलाई असुहाउँदिलो देखिने मात्र होइन, रोग समेत नित्याउँछ ।
कसरी घटाउने ?
पेट बढ्नुमा निस्क्रिय दिनचर्या जिम्मेवार छ । अक्सर बसेर काम गर्ने, शारीरिक रुपमा सक्रिय नहुने, साथसाथै अनियन्त्रित खाना खाने बानीले पेट बढ्छ । त्यसैले शारीरिक रुपमा सक्रिय हुनुपर्छ, पेट घटाउनका लागि । शारीरिक काम र नियमित व्यायामसँगै कतिपय योगा पनि गर्न सकिन्छ, जसले पेटलाई सहि आकारमा ल्याउन मद्दत गर्छ । यससँगै खानपानमा पनि सर्तक हुनुपर्छ । पेट घटाउनका लागि कस्तो खानपान सहि हुन्छ त ?
कागती पानीबाट दिनको सुरुवात
पेटमा जमेको बोसो कम गर्नका लागि कागती पानी एक उत्कृष्ट विकल्प हो । यदि बिहान मनतातो पानीमा कागती मिसाएर पिउने हो भने निकै फाइदा पुग्छ । यसरी नै बिहान कागती पानी सेवन गर्दा मोटाबोलिज्म त ठीक हुन्छ नै, पेटमा जमेको बोसो पनि कम हुन्छ ।
गुलियो एवं मिठाई निषेध
यदि तपाई पेटमा जमेको बोसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने गुलियो एवं मिठाइबाट टाढा रहनुहोस् । गुलियो पदार्थले पेटमा अतिरिक्त बोसो जमाउँछ ।
बिहान काचो लसुन
विहान उठेपछि नियमित रुपमा दुईरतीन केस्रा लसुन चपाउनुपर्छ । त्यसपछि कागती पानी पिउनुपर्छ । यो निकै प्रभावकारी उपाय हो, पेटको वोसो घटाउने । यसले तौल त घटाउँछ नै, शरीरको रक्त प्रवाह पनि सुचारु गर्छ ।
ओमेगा ३ फ्याटी एसिड
ओमेगा ३ फ्याटी एसिड शरीरको लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । मांसहारीले यसलाई माछाको माध्यामबाट लिन सक्छन् । माछामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । शाकाहारीले चाहि बन्दा, फूल गोभी, ओखर आदिको सेवन गर्नुपर्छ ।
पर्याप्त हरियो सब्जी
आफ्नो खानामा सब्जी र फल सामेल गरौ । यसबाट भरपुर मिनरल र भिटमिन मिल्छ । पेट पनि भरिन्छ । यस्ता खानेकुराले पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्मा हुन पाउँदैन ।
यदि तपाई पेट घटाउन चाहनुहुन्छ भने जंकफूड सेवन पूर्णत बन्द गर्नुहोस् । किनभने यसले तौल बढाउने भूमिका खेल्छ । यससँगै कम चिप्लो, मसलेदार खानेकुरा सेवन गरौ ।
माछाको तेलले पेटको वोसो घटाउने काम गर्छ । माछामा रहेको ओमेगा ३ फ्याटी एसिडले पेटको अतिरिक्त बोसो घटाउने काम गर्छ ।
– बिहान १५ देखि २० मिनेटसम्म आफुलाई सहज हुने हिसाबले दौडनुपर्छ ।
– १५ मिनेट जति व्यायाम गरौ । योग गरौ ।
– दिनभर कार्यलयमा बसेपनि सानोतिनो शारीरिक काम आफै गर्नुपर्छ । अर्थात निस्क्रिय बस्नु हुन्न ।
– एकसाथ धेरै खानेकुरा सेवन नगरौं । एक पटकमा थोरै थोरै खानेकुरा सेवन गरौ । बरु, धेरै पटक सेवन गरौ ।
– खानामा साग र सलादको मात्रा अत्याधिक हुनुपर्छ ।
– मासुजन्य पदार्थ, दुधजन्य पदार्थ, जंक फूड, मसलेदार, तारेको खानेकुरा सेवन नगरौ ।
– सकेसम्म उसिनेको खानेकुरा सेवन गरौ । साग सब्जी उसिनेर सेवन गरौ ।
– खाना खानसाथ सुत्ने वा दिउँसो सुत्ने गर्दै नगरौ ।
– सकेसम्म राती अबेरसम्म नबसौ । राती छिटै सुत्ने र बिहान चाडै उठ्ने बानी गरौ ।
दुई तिहाइभन्दा बढी महिलामा पुरुषको तुलनामा दमबाट मृत्युको सम्भावना दोब्बर: अध्ययन
बालबालिकादेखि वृद्धसम्म जाडोमा बढ्दै छालाको समस्या, के छ समाधानको उपाय ?
खुसी के हो ? कसरी मिल्छ खुसी ?